Umzamo ochanekileyo kunye neNdlela yesibhozo yobuBuddha
Icandelo leNdlela yesibhozo
Umzamo ochanekileyo, ngamanye amaxesha ubizwa ngokuba yi-Right Diligence, inxalenye yesithandathu yeNdlela yeBuddhism . UBuddha ufundise ukuba iNdlela yeNdlu yesishumi iyindlela yokwazi ukukhanya . Umzamo ochanekileyo (kwi-Pali, samma vayamo) , kunye neNgcono yokuCamngca kunye nokuLungisa okuKulungile , yenze icandelo loqeqesho lwengqondo yeNdlela.
Isona esona siseko, inkcazo yemveli yesenzo sokunene kukuzibhokoxa ukuhlakulela iimpawu ezintle kwaye ukhulule iimpawu ezingenakulungileyo.
Njengoko kubhalwe kwiCan Canon , uBuddha ufundise kukho imiba emine kwi-Right Effort. Kulula kakhulu:
Umgudu wokuthintela iimpawu ezingcolileyo - ngakumbi ukratshi, umsindo kunye nokungazi - ezivela.
Umgudu wokucima iimpawu ezingafanelekanga eziye zavela.
Umgudu wokuhlakulela ubuchule, okanye iimpawu ezintle-ngokukhethekileyo ukupha, ububele bothando, nobulumko (ukuchasana nokuhaha, umsindo, nokungazi) -engakabikho.
Umgudu wokomeleza iimpawu ezintle eziye zavela.
Ukuxhaswa kweNdlela yesibhozo
Ukuba ubheka kuyo yonke iNdlela yeZibhozo, unokubona indlela i-Right Effort isekela ngayo ezinye iindawo ezisixhenxe. Isihlandlo sesibhozo:
Intetho ethe tye
Umzamo o fa neleyo
Kubalulekile ukuqonda ukuba iNdlela yesibhozo ayikho uchungechunge lwezinyathelo eziqhubela phambili ozilawulayo ngexesha elinye.
Inxalenye nganye yendlela ixhasa zonke izinto, kwaye ukuzisebenzisa nayiphi na into efanelekileyo ifuna ukuqhuba ezinye iinkalo ezisixhenxe. Ngokomzekelo, ukuba sibheka oko uBuddha athi nge-Effort Effort, sinokubona ukuba kubandakanya ukuhlakulela ubulumko, obuxhasa i-Right View. Ukuphuhlisa iimpawu ezintle xa uhlambulule iimpawu ezingafanelekanga zisekela icandelo lezenzo zokuziphatha eziMgangatho, oNkulumke oluchanekileyo, iNyathelo elungileyo, kunye nokuPhila okuPhezulu.
Ziqhelise "Ngokunene," Akunzima
Unokucinga ukuba I-Right Effort ithetha ukuqhuba nzima , kodwa oko akunjalo. Ungalibali iMidiya Ephakathi, phakathi kokugqithisa. Ungaziphoqeleli ukunyamezela iinkqubo zobugcisa okanye uzitshintshe ukuba udinwe. Ukuba uqeqesho lwakho luba "yinto yokusebenza," yile ngxaki. Umfundisi weZen uThich Nhat Hanh uthi, "Ukunyaniseka okuLungileyo okuNye kwezine kubondliwa ngumvuyo kunye nomdla. Ukuba ukuqhuba kwakho akunakukuvuyisa, awuqhelanga kakuhle."
UBuddha wafundisa ukuba ukuziphatha kufuneka kufane nekhompyutheni yomtya. Ukuba izixhobo zikhululekile, aziyi kudlala isandi. Ukuba bazinzima kakhulu, baya kuphula. Ukuzibandakanya kufanele kube nondla, kungekhona ukucoca.
Xa ucinga nge-Effort Effort ucinga ngeeNqande ezihlanu, ukusuka kwi-Nivarana Sutta yeCan Canon . Zezi:
Isifiso esifanayo ( kamacchanda )
Ingxaki iya ( vyapada )
I-Sloth, i-torpor, okanye ukulala ( thina-phakathi )
Ukungenasiphelo nokukhathazeka ( uddhacca-kukkucca )
Ukungaqiniseki okanye ukungaqiniseki ( vicikiccha )
Ezi ziimpawu ezintlanu eziphazamisana ne-Right Effort. UBuddha wafundisa ukuba ingqondo-yomzimba, iimvakalelo, iimvakalelo kunye neengcamango-ziya kunqoba iziphazamiso.
Iindawo zokuThengisa - iLiquid Science Magic Trick